people Nepal » मध्यरातमा यौन सम्पर्क गर्न नमानेपछि रातीनै आफ्नी श्रीमतीको यसरी हत्या गरे ! मध्यरातमा यौन सम्पर्क गर्न नमानेपछि रातीनै आफ्नी श्रीमतीको यसरी हत्या गरे ! – people Nepal
मध्यरातमा यौन सम्पर्क गर्न नमानेपछि रातीनै आफ्नी श्रीमतीको यसरी हत्या गरे !
भारतको हरियाणा राज्यको कुरुक्षेत्र जिल्लाको जोगना खेडा गाउँका संजीव नामका व्यक्तिले श्रीमती सुमनको हत्या गरे । राती हत्या गरेका संजीव बिहान घर छोडेर भागे । संजीव हिँडेको लामो समयसम्म सुमन नउठेपछि परिवारले उनको कोठामा गएर हेर्दा उनी मृत भेटिएकी थिइन् ।
भारतीय प्रहरीका अनुसार बेलुकाको खाना खाएर श्रीमानसँगै सुत्न गएकी महिलाले श्रीमानले भनेजस्तो गर्न नमानेपछि श्रीमानले उनको हत्या गरिदिएका हुन् । आफूले भनेको नमान्दा रिसमा हत्या गरेको उनले प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए । श्रीमान् श्रीमतीबीच राती यौन सम्बन्धको विषयलाई लिएर झगडा भएको खुलासा भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार श्रीमानले राती यौन सम्बन्धको प्रस्ताव गरेकोमा श्रीमतीले नमानेपछि रिसाएका संजीवले हत्या गरिदिएका हुन् ।मृतक सुमनका माइतीले भने उनको हत्याको कारण अर्कै भएको दावी गरेका छन् । सुमनका दाजु रविले संजीवको अर्कै युवतीसँग अबैध सम्बन्ध भएको र सुमनले यसको विरोध गर्दा संजीवले हत्या गरेको दावी गरेका छन् ।
हालै सुमन २ महिनादेखि माइतीमा बसिरहेकोमा संजीव गएर अब यस्तो गल्ती नगर्ने भन्दै माफी मागेर फर्काएर घर ल्याएका थिए ।घटना शंकास्पद भएपछि डाक्टरहरुले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि खानपुर मेडिकल कलेज सोनीपत पठाएका छन् । संजीवको आफ्नै दाजुकी सालीसँग अबैध सम्बन्ध भएको खुलेको छ ।
यही सम्बन्धका कारण उनले सुमनलाई कुटपिट पनि गरेका थिए । यही कारण गाउँमा कैयौं पटक पंचायत पनि बोलाइएको थियो । संजीवको अबैध सम्बन्धका कारण भएको झगडापछि सुमन माइती गएकी थिइन् । सुमनका दाजु रवीरे संजीवसहित परिवारका ६ जनाविरुद्ध हत्या अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।